नर्सहरू नाचेको भिडियोपछाडिको पाटो अनि ४० वर्षदेखि आमाहरू बचाउन खटिएका डाक्टर
तस्वीर स्राेत : डा. मिङ्मा ग्याल्जेन शेर्पाकाे ट्विटर
अस्ति मंगलबार डा. मिङ्मा ग्याल्जेन शेर्पाले ट्विटरमा ‘ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमको रिभ्यु' भन्दै देउडा गीतमा नर्सहरू नाचिरहेका भिडियो पाेस्ट गरे । त्याे निकै रोचक थियाे । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आयोजनामा २१ दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा चार जना प्रशिक्षक राखेर ८८ जना नर्सलाई ‘अल्ट्रासाउन्ड मेसिन‘ चलाउने तालिम दिइएको थियो ।
'ग्रामीण अल्ट्रासाऊण्ड कार्यक्रमको रिभ्यु' सकेको अन्तिम दिनमा खुसियाली प्रकट गर्दै सुमधुर सुदूरपश्चिमेली भाकामा नृत्यमा तल्लीन नर्स बहिनीहरू ... pic.twitter.com/vTsBffLElt
— Mingmar G Sherpa (@DrMingmaSherpa) April 6, 2021
२०७७ सालमा मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारले नौवटा यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।३८ वर्षदेखि याे कार्यक्रम चल्दै आएको भए पनि यसमा सरकारको संलग्नता भने गएको ८ वर्षयता मात्र देखिन्छ ।
अभियान अघि बढ्दै गर्दा यसैसँग जाेडिएकाे बिर्सनै नहुने नाम हो, डा. मिङ्मा ग्याल्जेन शेर्पा । सोलुखुम्बुमा जन्मिएका उनी गर्भवती महिलाको जीवनरक्षाका खातिर झन्डै चार दशकदेखि खटिइरहेका छन् । ३८ वर्षअघि सोलुखुम्बु पुग्दा उनले उपचारको अभावमा मर्न बाध्य गर्भवती महिलाहरूको कारुणिक दृश्य देखे । र, यसको कारण पत्ता लगाउन उनले विल्कुल ढिला गरेनन् ।
कारण पत्ता लाग्याे, बच्चा आमाको पेटमा रहँदा कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्ने अल्ट्रासाउन्ड मेसिनकाे अभाव । उक्त उपकरणबाट पेटभित्र बच्चा कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्न सकिने र भविष्यमा सम्भावित जोखिम आकलन गरी उपचार गर्न सकिने शेर्पा बताउँछन् ।
जब शेर्पाले उक्त उपकरण जोहो गर्न थाले, तब ‘रेडियोलोजिस्ट‘ जस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव गाउँमा देखे । त्यसपछि उनले जिल्लातिरै भएका नर्सलाई तालिम दिएर तत्कालका लागि काम चलाउने सोच बनाए । र, २०४० सालदेखि उनले ‘ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम‘ अभियान सुरु गरे ।
शेर्पाले सोलुखुम्बुमा मात्रै २४ वर्षजति नर्सहरूलाई अल्ट्रासाउन्ड मेसिन चलाउने तालिम दिए । २०६२ सालपछि उनले हिमाली जिल्लाहरूमा समेत उक्त कार्यक्रम भित्र्याए । डा. शेर्पा भन्छन्, ‘रेडियोलोजिस्टजस्ता जनशक्ति छैनन् भन्दैमा गाउँघरका महिलालाई मर्न त दिनुभएन नि ! त्यसैले बरु नर्सहरूलाई नै तालिम दिएर भए पनि अहिलेका लागि काम चलाउन भनेर कार्यक्रम गरेका हौँ ।'
शेर्पाका अनुसार गाउँघरमा अझै पनि गर्भवती महिलाहरू राम्रो उपचारको अभावमा मरिरहेका छन् । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई अझै बढाउनुपर्ने उनी ठान्छन् । भन्छन्, ‘कम्तीमा बच्चा पेटमा कसरी बसेको छ भनेर अगाडि नै पत्ता लगाउन सकियो भने आवश्यकताअनुसार गर्भवती महिलाको उपचार त गर्न सकिन्छ ।'
आठ वर्षयता सरकारले नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि त्यसको गति एकदमै सुस्त रहेको शेर्पाकाे गुनासाे छ । कामको गति यस्तै भइरहे अझै ५० वर्षसम्म जिल्ला अस्पतालहरूमा रेडियोलोजिस्ट नपुग्ने उनी बताउँछन् ।
‘यस्तै तालले त अझै ५० वर्षसम्म जिल्लामा रेडियोलोजिस्ट पुग्दैनन् । त्यसैले आवश्यक पूर्वाधार नबन्दासम्म र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुञ्जेल भएका नर्सलाई नै तालिम दिएर काम चलाउनुपर्छ भन्ने मेराे मान्यता हाे,' उनले भने ।
सरकारले चासाे नदिए आफू छुट्टै कार्यक्रम चलाउन तयार रहेको शेर्पाले बताए । यसका लागि खर्च जुटाउने उपाय उनीसँग छ । आफ्नाे पुरानाे अनुभव सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘हामीले जुन कम्पनीको मेसिन ल्याउँछौँ, उसैले प्रशिक्षक पनि पठाइदिन्छ । विगतमा पनि जर्मन डेभेलपमेन्ट बैंक र युनिसेफजस्ता संस्थाले सहयोग गरेका थिए ।'
(तस्वीर साैजन्यः डा. मिङ्मा शेर्पाकाे ट्विटर)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत २६, २०७७, ०७:५१:००